လူအပေါင်းတို့သည်အလှကြည့်ဖို့ နမီးဘီးယားဆွဲဆောင်မှု , များစွာသောခရီးသွားများအတွက်တိုင်းပြည်တစ်ဝှမ်းလှုပ်ရှားမှုကိုပိုမိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးသော, ငှားရမ်းကားများအတွက်ယူကြိုက်တတ်တဲ့။ အဆိုပါသွားရောက်လည်ပတ် Namib သဲကန္တာရ သည်သွားရောက်လည်ပတ် လေ့လာကြရအောင်ကမ်းခြေ , အ Caprivi အတွက်ကမ်းခြေပေါ်မှာအိပ်ရနှင့်ကျော်ကြားသောတွေ့မြင် ချောက်ငါးမြစ် - ကျနော်တို့က "အနက်ရောင်တိုက်ကြီး" ပေါ်တွင်တည်ရှိသည်ကားကိုငှားရမ်းကုမ္ပဏီတွေထဲကတစ်ခုမှဖွင့်ဆိုပါကဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကြောင့်နိုင်ငံအတွင်းရှိလမ်းများ၏အရည်အသွေးအလိုရှိသောခံရဖို့သိပ်အရွက်ဆိုတဲ့အချက်ကိုငှါ, စံပြ option ကိုလေးဘီး drive ကို SUV ကားငှားဖို့ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ ငှားရမ်းခကုန်ကျစရိတ်မော်တော်ယာဉ်များအတွက်ရွေးချယ်ထားသော "stuffing" ပေါ်တွင် မူတည်. သိသာစွာကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။ ရှည်လျားသောတိုင်းပြည်ခရီးစဉ်စီစဉ်ထားရာတောငျးဆိုခကျြ, တွင်, စက်တပ်ဆင်ထားနိုင်ပါတယ်:
တစ်ဦး burner နှင့်အတူဓာတ်ငွေ့ပုလင်း;
မြို့ထဲကဝေးစွန့်ခွာ, သင်အဆာမျှမျှတတကျယ်ပြန့်ကွန်ယက်ကိုဖြစ်ကြသည်ဟူသောအချက်ကိုရှိနေသော်လည်းလောင်စာဆီအပိုသံဗူး၏စုံတွဲတစ်တွဲကိုယူသင့်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်သင့်ကားလိုအပ်ချက်၏အမှု၌လိုအပ်သောထောက်ခံမှုရပါလိမ့်မယ်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုဘူတာရုံလည်းရှိသေး၏။
ပြည်နယ်အဘို့အလက်ဝဲလက်အသွားအလာဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကခဏမေ့လျော့ခြင်းကိုမပြုရပါ။ ဒီမှာလှုပ်ရှားမှုဥရောပ၌ရှိသကဲ့သို့ဒါသွက်သည်မဟုတ်သေးပေါ့ဆအကုန်အကျရှိနိုင်ပါသည်။ ပေမယ့် ထို့အပြင်ဒီအာဖရိကနိုင်ငံတွင်မွေးစားစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာသင့်တယ်:
ယာဉ်မောင်းတစ်ဦးကြီးများဒဏ်ငွေရင်ဆိုင်နေရ၏အမြန်နှုန်းကိုချိုးဖောက်သည် ဖြစ်. ,
ယာဉ်မောင်းအပေါင်းတို့နှင့်တကွခရီးသည်များ, ချွင်းချက်မပါဘဲ, ထိုင်ခုံခါးပတ်ဝတ်ဆင်ရမည်,
သွားရှေ့ဆက်မှီ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လက်ဝဲဘက်အပေါ်ခွင့်ပြုသဖြင့်,
နှစ်ပေါင်း 70 မှ 22 နှစ်၏ကားမောင်းသူအသက် (3 နှစ်ထက်ကားမောင်းအတွေ့အကြုံကိုမနည်း);
ထို့အပြင်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ (အင်ဂိုလာနဲ့ဇမ်ဘီယာ) ၏နယ်စပ်ဖြတ်ကူးနိုင်ရန်အတွက်ကြောင့်ကားပေါ်တွင်ငှားရမ်းခြင်းအပေါ်စာရွက်စာတမ်းများ, အဖြစ်မှတ်တမ်းထုတ်လုပ်ရန်လိုအပ်လျက်ရှိ၏ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရန်သူ၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုစာရွက်စာတမ်းများများ၏လက်မှတ်ရေးထိုးသည့်အချိန်တွင်ကုမ္ပဏီကိုအကြောင်းကြားရပါမည်။
ဒေသအတွက် 60 km / h ထက်ပိုမိုမြင့်မားမဖြစ်သင့်မြန်ဆန်;
ဒါကြောင့်လမ်း၏အရည်အသွေးခွင့်ပြုလျှင်မြို့ပြင်, ယာဉ်မောင်း, 100 km / h မှကားကိုအရှိန်မြှင့်နိုင်,
ကားလမ်းပေါ်တွင် 120 km / h ဖို့အမြန်နှုန်းပြကိရိယာကိုတက်ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။
နမီးဘီးယားအတွက်အမှတ်အသားများနှင့်သတိပေးဆိုင်းဘုတ်များငါတို့ဥစ်စာထဲကနေမတူကြပေမယ့်သူတို့ကသိပ်မရှိကြပေ။ ထို့ကြောင့်, နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်အတွင်းကားတစ်စီး၏ဘီးကိုယူပြီးမီ, အလွန်ဂရုတစိုက်သူတို့ကိုလေ့လာရန်လိုအပ်သောဖြစ်ပါသည်:
ကင်ညာနှင့်တန်ဇန်းနီးယား - သာ. ကောင်း၏ထားတဲ့?
မောရစ်ရှ - ဆွဲဆောင်မှုများ
ကြက်ဆင်ပေါင်၏လွှာ - ချက်ပြုတ်နည်းများ
ဒူးဖို့အင်္ကျီကိုဝတ်ဆင်ရန်အဘယ်အရာ မှစ. ?
မီးဖိုချောင်နဲ့ဧည့်ခန်းအကြား partition ကိုပွတ်ဆွဲကူးပြောင်းမှု
အဘယ်ကြောင့် valerian တူသောကြောင်ကြသနည်း
ဒဏ္ဍာရီထဲမှာကြံ့ - ကြံ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်အတွက်တည်ရှိသလား?
Sunberry - ကြီးထွားလာ